Gxila kwii-API zokuKhulisa isicelo sakho (Del.icio.us kunye neTechnorati) | Martech Zone
Gxila kwii-API zokuKhulisa isicelo sakho (Del.icio.us kunye neTechnorati)
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 20, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngexesha ufunda le, inokulungiswa… kodwa ungaqaphela ukuba my Itekhnoloji Isikhundla ngu 0. Kungenxa yokuba iTechnorati API ayibuyi kwinqanaba njengenxalenye yomnxeba (ibuyisela indawo evaliweyo ).
Njengokuba, Del.icio.us' API iyabamba. Balungisa umba apho kungekho zithuba ziya kubuyiselwa ngolunye usuku xa usenza isicelo sethegi ethile. Namhlanje kubuyisa nje irekhodi lokuqala ngaphakathi kwelegi. Umsebenzi ozenzekelayo othumela iiDaily Reads zam awuzange ubhale nawo.
Ndibeke izicelo kunye neenkampani zombini kodwa andifumani mpendulo. Zombini ziinkampani ezinkulu eziye zafikelela kum xa bendifuna uncedo ngaphambili kwaye ndiyathemba ukuba ziyakwenza ngoku. Isenokungabi njalo kwezi nkampani zimbini, kodwa iinkampani ezininzi ziyayiphatha eyazo API njengenxalenye yesibini yenkonzo yabo okanye usetyenziso.
Yimpazamo enokubulala ishishini lakho kungekudala. Sikhawulezisa ukuya kwiwebhu 'ye-semantic' ngeeplagi, iiwijethi, i-rss, amaphepha esiko, njl.njl apho ii-APIs ziya kubaluleka ngakumbi kunendlela yokujongana noMsebenzisi ngokwazo. Kwi Sibanisa phezulu isicelo, ndinganxibelelana neseva esembindini ethi yona inxibelelane neeAPI ezininzi. Ukuba ndiyinkampani yeMashup, andizukukwenza amashishini angazithathiyo API nzulu.
IIMHO, esi sisifundo sokuba Uphando ndafunda kwangethuba. Ukuba ujonga ngononophelo uGoogle, isicelo ngasinye abasizisayo kwintengiso sinee-API ezinamandla ezimema ubukrelekrele bomntu wesithathu. Kukho amashishini amaninzi kunye nezicelo ezakhelwe ngaphandle kwezo APIs ngokunjalo.
Endaweni yokuba uxhase ubukrelekrele besithathu, ezinye iinkampani zilwa nazo zizonke. I-Statsaholic kuye kwafuneka itshintshe igama layo ukusuka ku-Alexaholic ngenxa yeempawu zorhwebo. Khawufane ucinge ukuba… umntu othile wakha ujongano oluhle lomsebenzisi olukhuthaza amanani owaphuhlisileyo. Baye basasaza ezo manani kumakhulu amawaka (mhlawumbi izigidi) zabasebenzisi. Fikelela apho ngekungazange kusekwe ukuba ukhe wazama ukuyenza ngokwakho… kwaye uyacaphuka.
Kule veki kwiKlabhu yethu yeNcwadi yaseIndianapolis, sixoxe I-Starfish kunye neSigcawu: Amandla angenakunqandeka eMibutho engenaNkokeli. Inqaku eliphambili kule ncwadi kukuba iSigcawu simele umbutho ophezulu. Bulala intloko kwaye umzimba awunakuphila. Sika i-Starfish kwaye uphele nge-2 Starfish.
Uphendlo lukaGoogle ithathe isabelo sentengiso kwiTechnorati. Ndiyayithanda iTechnorati kwaye ndicinga ukuba kulula kakhulu ukusebenza nayo, kodwa akukho ngxoxo ithi uGoogle lilori enkulu kwisipili esingasemva. Kule veki uGoogle ukhuphe eyakhe Ajax feed API… Oku kukungenelela okungaphaya kwiTechnorati nokuba bayakuqonda okanye abakuqondi. (Ikhuphisana neYahoo! Imibhobho.)
Andikuqondi ukoyikwa kweenkampani ekuvuleni ii-APIs zazo kunye nokuqinisekisa ukusebenza ngokukuko kunye nenkxaso yazo kwezinye iinkampani, zona, ukuze ziqhubele phambili. Zininzi izinto eziluncedo… uphuhliso lomsebenzisi oluncinci, ukungabikho kweebugs, inkxaso encinci, i-bandwidth encinci (an API umnxeba ungaphantsi kwedatha kunephepha) kunye namashishini amaninzi axhomekeke kwishishini lakho. Aba ayingobantu ofuna ukukhuphisana nabo okanye ukubaphelisa, aba ngabantu ofuna ukubamkela kwaye ubavuze.
Ukuba ubufake isicelo sakho seWebhu njengomthi, unokufuna ukucinga nge-UI yakho njengamagqabi kunye nefayile ye- API njengeengcambu zakho. Amagqabi ayimfuneko kwaye mhle, kodwa ukuba neengcambu ezinzulu kuya kukhusela ishishini lakho kwikamva.
Ngaba lo Mntu wakha iNqaku leWordPress okanye yintoni?!
Prapta: Yonke into eBomini ilapha
Epreli 21, 2007 ngo-5: 19 PM
Admittedly, keeping our back-end operations smooth and improving the website take precedence but, fear not, our API users are important to us. Glad to see your widget displaying the rank again, I think that validates that the fix made to the API took effect 🙂
Epreli 21, 2007 ngo-6: 01 PM